Mianara maka sary ao anatin'ny 31 andro: Mazava ho azy fa Mazava ho azy | Famoronana an-tserasera
Ny fakana sary dia manana enta-mavesatra ara-teknika sy ara-teôria lehibe. Ilaina ny fahafantarantsika zavatra fototra sasany toy ny firafitry ny fakantsary na ireo anton-javatra samihafa izay misy fiantraikany amin'ny fakana sary. Ireo mpiara-miasa aminay Dzoom Namelabelatra izy ireo Mianara sary afaka 31 andro, fampianarana feno izay mampivondrona ireo fitsipika fototra ao amin'ny pejy 200 mahery hianatra hahay tsara ny fomban'ny mpaka sary amin'ny fomba lalindalina kokoa. Ny tsara indrindra dia maimaim-poana tanteraka izy io ary manome fampahalalana marobe izay azo ampiharina sy ilaina ho an'ny matihanina rehetra amin'ny tontolon'ny sary.
Anisan'ireo ao anatiny ny fahitanao ny morphology an'ny fakantsary fakana sary, ny fizotran'ny fakantsary nomerika, ny karazan-tsary sy fakan-tsary misy, na ny fiheverana ny haingam-pandeha sy ny haingam-pandeha, ankoatry ny zavatra maro hafa. Ireo hevi-dehibe fa etsy andanin'izany dia efa niatrika lahatsoratra maro tao amin'ny Creativos Online izahay ary amin'ity boky mahafinaritra ity dia ho hitanao voafintina sy lavorary namboarina tamin'ny fanaterana 31 mora levonina afaka 31 andro. Amin'izany fomba izany, raha mametraka saina sy fifehezana kely amin'ny anjaranao ianao dia ho afaka hahazo ambadika be dia be ary hampihatra izany isan'andro raha efa manana ny fakantsarinao.
Mba hahafahanao misintona an'ity fampianarana Maimaimpoana ity dia tsy maintsy tsindrio fotsiny ity rohy manaraka ity izay hahitanao rakitra iray amin'ny endrika pdf izay mamporisika anao hanonta izany eny satria araka ny nolazaiko dia lava be io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Mianara maka sary ao anatin'ny 31 andro: Mazava ho azy fa Mazava ho azy